Nhau - Carton Fair Onlline Kutaura
Cold Yakakungurutsirwa Simbi Tube / Pipe
Dema Simbi Tube / Pipe
Yakatenderedza Nhema Isimbi Tube / Pipe
Square Uye Rectangular Simbi Tube / Pipe
Yakasviba Simbi Tube / Pipe
Kupisa Yakakwirisa Chero Tube / Pipe
Yakagadziriswa Simbi Tube / Pipe
Pregalvanized Simbi Tube / Pipe
Kupisa Kwakakoswa kwakakurudzira Simbi Tube / Pipe
Yakajeka Yesimbi Yesimbi
1000mm kwakakurudzira Coils
Simbi Plate / Sheets
Nhema Simbi Sheet
Hot Rolled Mahwendefa
Yakagadziriswa Sheet Sheet
Ruvara Rakafukidzwa Zinc Coil / Perpaint Simbi Coil
Yakagadzirirwa / Yakabatanidzwa Yesimbi Wave Tile
Carton Fair Onlline Kutaura
Tiri kuenda ku guangzhou carton fair kubva muna June 15 kusvika June 25
Nekuda kwehutachiona hwakapararira pasi rese, hatigone kuenda kuGuangzhou kunosangana, saka tinotaridza online show. Iyi inyanzvi nyowani yekupa online show. Kunyangwe iwe uri kumba, unogona kuona chigayo chedu. Iwe unogona kuona zvese izvo zvaunoda kuona. Tichaita 24hour live show, isu tichaenda newe kunharaunda yedu yekushanda, gadzira redu rekugadzira, zvinhu zvedu zvekutengesa, nzira yedu yekurodha, uye timu yedu.
Kana iwe usingazive kuti ungatiwana sei, iwe unogona kuenda kune carton fair offical webhusaiti: http://www.cantonfair.org.cn uye tsvaga yedu booth Nhamba 11.2 L 43, kana iwe unogona kushandisa yechipiri nzira nekutsvaga zvigadzirwa simbi pombi.
Havasi vese vanopa chinese vanogona kuenda kumusangano uyu wepamhepo, chete yakanaka kambani yakanyoreswa neChina Ministry of Commerce ndiyo inogona kuenda, kuti ugone kuzorora kusarudza mutengesi waunoda.
Pakupedzisira, ndakamirira kuti iwe ushanyire dumba redu Kwete. Uye kuita kutarisana chiso nechiso kutaura neni.
Nguva yekutumira: Jun-06-2020
Shengfang Township, Langfang Guta, Hebei Dunhu, China